WAAAW COME-BACK Ronaldo oo guul qaali ah ku hogaamiyey naadigiisa King, United – Kooxda.com
HomeWararka MaantaWAAAW COME-BACK Ronaldo oo guul qaali ah ku hogaamiyey naadigiisa King, United
September 29, 2021 Osman Fantastic Wararka Maanta 1
Naadiga Manchester united ayaa garoonkeeda ku Masraxa riyada ku qaabisay jkooxda Villareal , labada kooxood ayaa isku dayo & dabaal dabadan sameeyey, United oo doonaeysay iney ka aargutaan guuldaradii ay kala kulmeen finalkii koobka Uerope leage.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay dar dar xoogan oo labada kooxoodba ayku doonayeen iney fursado ku helaan daqiiqadiii ugu horeeyey United ayaa isku dayday iney ku helaan goolka 1aad ee kulanka iyagoo usii maraya weerarkooda dabka ah ee kooxda .
Villareal ayaa isku dayday iney ka jawaabaan weerarada united ka imanayey waxaana ay heleen fursado ah oo ay kamid aheyd tii uu bad baadiyey Varane hadii kale waxa ay aan laheyd gool, Kooxda villareal ayaa ku guuleysatay qeybtii hore ee ay difaac soo horeeya ayka difaacdaan hadana ay ka digtoonaadaan qatarka weerarka , United xidigaheeda ayaa ku fashilmay iney abuuraan fursado dhowr ah,
Fursad halis aheyd oo heyshay dhamaadkii qeybta hore ayaa villareal ka bad baadiyey xidigii hore ee Liverpool Moreno lkn daqiiqad kadib 44 daqiiqo mar key aheyd ayaa kubad qurux badan oo shuut aheyd waxaa lagu helay goosha United lkn De Gea ayaa bad baadiyey sidaas ayaa qeybta hore 0-0 lagu kala tagay.
Geesta labada naadi ayaa qeybta dambe dagaal ugalay mid kastaba sidii maslaxadeeda natiijada kaga dhigi laheyd waxaa jiray fursado labada dhinac lkn Villareal wax badan uma baaneyn qeybtii hore waxaana goolka u dhaliyey P. AlcacerA. halka uu caawiyey Danjuma lkn inta wixii ka dambeeyey dufaantii Manchester United kubad saaruukhh aheyd ayuu dhaliyey Alex Telles dambeedka Man utd si ay natiijada ay unoqoto 1-1.
Lkn wlama filaanka waxa uu ahaa markii Ronaldo uu dhaliyey waqtigii geerida sidaas ayey 2-1 kaga adkaatay kooxda reer Spain Waxkale United
Shirqoolkii Barcelona , Bad-baadadii Ronaldo, Guushii Juve Ee Chelsea Iyo Bandhigii Munich
Qoraalada naga saxa dee